Manakara : basy Kalachnikov iray sy bala 26 saika hamidy 2 600 000 Ar | NewsMada
Manakara : basy Kalachnikov iray sy bala 26 saika hamidy 2 600 000 Ar
Saron’ny zandary tao Manakara, afakomaly ny lehilahy iray saika hivarotra basy Kalachnikov sy bala mitentina 2 600 000 Ar. Tsy fantatra kosa izay nahazoany ity fitaovam-piadiana mahery vaika ity…
Teo amoron-dranomasin’Ampilao Manakara no tratran’ny zandary ity lehilahy voarohirohy ho nivarotra basy Kalachnikov sy bala ity. Araka ny loharanom-baovao voaray, nahazo loharanom-baovao ny zandary fa mivarotra basy Kalachnikov sy bala izy ka mitentina 2 600 000 Ar hamarotany ny iray amin’izany. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny zandary nanao ny vela-pandrika rehetra ka noraisim-potsiny izy niaraka tamin’ilay basy Kalachnikov iray miaraka amin’ny bala 26 ary “chargeur” iray. Ny zandary ao Manakara no misahana ny famotorana mikasika ity raharaha ity.
Tsy vao izao no nahitana olona mpanao trafikana fitaovam-piadiana mahery vaika toy izao. Maro rahateo ireo jiolahy mampiasa itony fitaovam-piadiana itony. Misy ifandraisany amin’izany ity raharaha varotra basy ity?
Iza anefa no tena mampiasa itony basy mahery vaika laharana voalohany itony? Ireny niaraha-nahita ireny ny zava-nitranga tany Toamasina fa basy Kalachnikov miisa efatra sy bala anjatony ary grenady mahery vaika vita sovietika no nampiasain’ireo jiolahy tamin’iny fakana an-keriny iny. Tsy azon’ny olon-tsotra tazonina anefa itony fitaovam-piadiana itony. Matoa anefa ireny tonga eny am-pelatanan’ny jiolahy, misy ny firaisana tsikombakomba eo amin’ny mpitandro filaminana.